Miwani The Indian Face - THE INDIAN FACE
Alpine Matema / Bhuruu
Alpine Matema / Bhuruu 64.95 € 175.00 €
Alpine Brown Tortoise / Brown 64.95 € 175.00 €
Hookipa Nhema / Nhema
Hookipa Nhema / Nhema 64.95 € 195.00 €
Hookipa Nhema / Green
Hookipa Nhema / Green 64.95 € 195.00 €
Hookipa Brown Tortoise / Nhema
Hookipa Brown Tortoise / Nhema 64.95 € 195.00 €
Hookipa Green Tortoise / Nhema
Hookipa Green Tortoise / Nhema 64.95 € 195.00 €
Mweya Nhema / Nhema
Mweya Nhema / Nhema 64.95 € 165.00 €
Mweya Nhema / Nyoro
Mweya Nhema / Nyoro 64.95 € 165.00 €
Soul Brown Tortoise / Bhuruu
Soul Brown Tortoise / Bhuruu 64.95 € 165.00 €
Mweya Green Tortoise / Nhema
Mweya Green Tortoise / Nhema 64.95 € 165.00 €
Ushuaia Nhema / Nhema
Ushuaia Nhema / Nhema 64.95 € 185.00 €
Ushuaia Nhema / Bhuruu
Ushuaia Nhema / Bhuruu 64.95 € 185.00 €
Ushuaia Nhema / Nyoro
Ushuaia Nhema / Nyoro 64.95 € 185.00 €
Ushuaia Blue Tortoise / Nhema
Ushuaia Blue Tortoise / Nhema 64.95 € 185.00 €
Ushuaia Brown kamba / Brown
Ushuaia Brown kamba / Brown 64.95 € 185.00 €
Mupata Wakuda / Bhuruu
Mupata Wakuda / Bhuruu 64.95 € 155.00 €
Valley Blue Tortoise / Nhema
Valley Blue Tortoise / Nhema 64.95 € 155.00 €
Valley Brown kamba / Brown
Valley Brown kamba / Brown 64.95 € 155.00 €
Valley Green Tortoise / Nhema
Valley Green Tortoise / Nhema 64.95 € 155.00 €
Free Spirit Wood / Nhema
Free Spirit Wood / Nhema 44.95 €
Free Spirit Camo / Nhema
Free Spirit Camo / Nhema 44.95 €
Free Spirit Tortoise / Nhema
Free Spirit Tortoise / Nhema 44.95 €
Free Spirit Girinhi / Dema
Free Spirit Girinhi / Dema 44.95 €
Free Spirit Bvuu / Bhurawu
Free Spirit Bvuu / Bhurawu 44.95 €
Free Spirit Bhuruu / Dema
Free Spirit Bhuruu / Dema 44.95 €
Free Spirit Nhema / Bhuruu
Free Spirit Nhema / Bhuruu 44.95 €
Free Spirit Black / Brown
Free Spirit Black / Brown 44.95 €
Free Spirit Black / Green
Free Spirit Black / Green 44.95 €
Free Spirit Black / Black 44.95 €
Frontier Brown Camo / Nhema
Frontier Brown Camo / Nhema 44.95 €
Frontier Kamba / Girini
Frontier Kamba / Girini 44.95 €
Frontier Dema / Bhuruu
Frontier Dema / Bhuruu 44.95 €
Frontier Nhema / Bronze
Frontier Nhema / Bronze 44.95 €
Frontier Nhema / Nhema
Frontier Nhema / Nhema 44.95 €
Kahoa Kamba / Nhema
Kahoa Kamba / Nhema 44.95 €
Kahoa Green Haze / Nhema
Kahoa Green Haze / Nhema 44.95 €
Kahoa Nhema / Tsvuku
Kahoa Nhema / Tsvuku 44.95 €
Kahoa Nhema / Bronze
Kahoa Nhema / Bronze 44.95 €
Kahoa Nhema / Nhema
Kahoa Nhema / Nhema 44.95 €
Polar Wood / Nhema 44.95 €
Polar Kamba / Girini
Polar Kamba / Girini 44.95 €
Polar Black / Brown
Polar Black / Brown 44.95 €
Matanda / Bhuruu Reef
Matanda / Bhuruu Reef 44.95 €
Matanda / Nhema Reef
Matanda / Nhema Reef 44.95 €
Reef Camo / Nhema
Reef Camo / Nhema 44.95 €
Reef Brown Camo / Nhema
Reef Brown Camo / Nhema 44.95 €
Green / Nhema Reef
Green / Nhema Reef 44.95 €
Tsvuku / Nhema Reef
Tsvuku / Nhema Reef 44.95 €
Bhuruu / Nhema Reef
Bhuruu / Nhema Reef 44.95 €
Nhema / Bhuruu Reef
Nhema / Bhuruu Reef 44.95 €
Nhema / Tsvuku Reef
Nhema / Tsvuku Reef 44.95 €
Arrecife Nhema / Bronze
Arrecife Nhema / Bronze 44.95 €
Nhema / Green Reef
Nhema / Green Reef 44.95 €
Nhema / Nhema Reef
Nhema / Nhema Reef 44.95 €
Freeride Wood / Bhurauni
Freeride Wood / Bhurauni 44.95 €
Freeride Wood / Nhema
Freeride Wood / Nhema 44.95 €
Freeride Kamba / Girini
Freeride Kamba / Girini 44.95 €
Freeride Bhuruu / Bronze
Freeride Bhuruu / Bronze 44.95 €
Freeride Bhuruu / Dema
Freeride Bhuruu / Dema 44.95 €
Freeride Nhema / Bronze
Freeride Nhema / Bronze 44.95 €
Freeride Nhema / Nhema
Freeride Nhema / Nhema 44.95 €
Kubuda Kamba / Brown
Kubuda Kamba / Brown 44.95 €
Kubuda Green Haze / Nhema
Kubuda Green Haze / Nhema 44.95 €
Kubuda Kwevatema / Bhuruu
Kubuda Kwevatema / Bhuruu 44.95 €
Kubuda kweBlack / Bronze
Kubuda kweBlack / Bronze 44.95 €
Kubuda kweNhema / Nhema
Kubuda kweNhema / Nhema 44.95 €
24 HOUR FLASH ZVIPO
SUNGLASSES DZEVARUME NEVAKADZI
Magirazi ezuva anokosha anokosha muzuva nezuva kune chero munhu. In The Indian FaceIsu tinotenda, imwe yemhando dzakanakisa dzemagirazi ezuva, isu tine nyanzvi mukugadzira chakanakisa chigadzirwa pamusika pamutengo wakanakisa. Nese yega yega yedu online magirazi egirazi muunganidzwa isu tinoedza kuzvivandudza pachedu. Yekupedzisira inogara iri nani pane yapfuura, nei? Nekuti timu yedu yehunyanzvi inoshandura uye inogadziridza magirazi edu ezuva kumiganhu isingafungidzirwe, zvese padanho re lens uye pamadhigiri emafreyimu, nenzira imwechete iyo timu yedu yekugadzira inosarudza uye inosarudza akanakisa mamodheru uye musanganiswa. unogona kutenga online. Tine mamodheru egirazi dzakatenderera, magirazi akaenzana, magirazi emafashoni, magirazi emitambo, uye runyorwa rurefu rwezvisarudzo zvichaita kuti iwe uwane chipfeko chakanakisa chenguva yega yega uye chiitiko.
En The Indian Face tinoda kubheja pane vanhu vanoshingaira, vanozvipikisa zuva nezuva. Zvemweya yemahara senge isu tine nhau dzakanaka: mune yedu online magirazi egirazi epamhepo isu tine akawanda magirazi ezuva anowanikwa polaryakasimudzwa kuitira kuti iwe ugone kusarudza iyo yaunonyanya kuda uchiziva kuti maziso ako anogara akachengeteka kubva kune inokuvadza radiation.
Chii chinotisiyanisa kubva kune mamwe magirazi egirazi?
Yedu epamhepo magirazi egirazi mamodheru ane lenzi polarkusimudzwa, kuchengetedzwa UV400 uye iwo ari CAT.3, kureva kuti, yepakati mwenje yekutsvaira mwenje iyo inovapa kuita kwakazara kuita uye inovaita vakanakira chero nguva yezuva uye mamiriro ekunze. Isu tinopa akasiyana magirazi ezuva polarakasimudzwa (chaizvo) kuenda kumakomo, kuenda kumahombekombe, kusvetuka, kuenda kunze kunotamba mitambo panze kana, kungoti, kutakura zuva nezuva tsvaka mamwe maguta. Yayo avant-garde dhizaini yakakodzera kusangana nechero mhando ye nguo Kune varume nevakadzi.
Ndeapi magirazi ezuva polarkusimudzwa? Lenzi dzinoshanda sei polarkusimuka?
Iwo magirazi ezuva ane lenzi ari polarakasimudzwa. Iye polarKusimudzwa firita vertical iyo inovhara mwaranzi yechiedza kubva kuzuva inosvika kumeso edu yakatwasuka, semuenzaniso, apo mwaranzi yezuva inoratidza chando, mvura yegungwa kana asphalt. Kubatsira kukuru kwemagirazi ezuva polarkukwiridzirwa ndiko kuita kuti chiono chako chinakidze uye chigadzikane.
Miwani polarKusimudzwa kunogara kuri sarudzo yako, uye zvakakosha kuti uvatenge vakasimbiswa neEU uye neidziviriro yeUV 400. Chero mamwe magirazi ezuva polarKusimudzwa hakukoshe kukudzivirira kubva kuzuva. Kana iwe uchida kupfeka magirazi ezuva akanakisa, funga kuti ndeapi anokodzera iwe, magirazi egirazi, kana magirazi ezuva akapoterera. Chechitatu, funga nezve chiitiko chauchazoita, kana chiri mumba kana kunze, kana ari masikati kana husiku, kana kuri muzhizha kana munguva yechando; zvese izvi zvinhu zvinokanganisa sarudzo yako kana uchitenga magirazi ezuva polarkusimuka.
Sei tichigadzira Masunglass Polarized Man uye Sunglasses Polarized Woman? Ndezvipi zvakanaka zvavanazvo?
Kubatsira kukuru kwemagirazi ezuva polarchakasimudzwa ndechekuti vanopa chiono pasina kufunga. Zvirinani iwo mwenje mwenje iwo anonyanya kuwanda, sezvatakataura.
Magirazi ezuva ane polaryakasimudzwa inopa hukuru hwakanyanya uye nhanho yepamusoro yekusiyanisa.
Ivo vanoderedza eyestrain uye eyestrain, nekupa iyo yakasikwa uye primal coloring.
Sefa yemagirazi ezuva polarized inogona kusanganiswa nemamwe mafirita akakosha, senge mafirita emwenje anooneka uye firita yeUV, inodikanwa nemutemo, nenzira yekuti vanopa dziviriro yakakwana.
Nenzira imwecheteyo, isu tinokuudza muchidimbu humwe hunyanzvi hunhu hweedu magirazi egirazi polarized iyo inogona kufarira iwe:
Ultra mwenje furemu yakagadzirwa nePC kana polycarbonate. Iyo polycarbonate yatinoshandisa mumirazi yedu yezuva polarKusimudzwa ndeyemhando yepamusoro iriko mumusika, inodzivirira, yakajeka uye yakasununguka.
Mazhinji emafuremu edu anowanikwa muchitoro chedu chepamhepo chepamhepo ane mashanu-bar titanium hinges ekukura kwakakura pakuita kwakanyanya. Magirazi ezuva anokwanisa kuvhurwa nekuvharwa zviuru nezviuru, saka zvakakosha kuti uve nemahinji epamusoro emhando yepamusoro anokwanisa kumira nekufamba kwenguva.
Kana chikamu chehunyanzvi chemasikati evarume vedu nemagirazi evakadzi chatsanangurwa, isu tichaedza kutsanangura zviri kumashure kwekugadzirwa kweedu kwazvino kuunganidza. Isu tinoita magirazi echinyakare, akaenzana magirazi egirazi, magirazi anotenderera, magirazi emafashoni?
En The Indian Face isu tagara tichinyanya kunetseka nezve aesthetics. Ehe, aesthetics. Isu tinonzwisisa hupenyu sekusvinwa mune yega yega yega masekondi uye izvo, zvinoreva, zvakare kumanikidza ese maekisheni nguva atinawo padyo, kunyangwe tichifunga nezvekupfeka magirazi edu ezuva polarakasimudzwa kuenda kumunda, kunakidzwa nekufamba mumakomo, kugeza pamhenderekedzo yegungwa, mukwanisi a nguo kongiri, mutambo o Zvisizvo, saka pakati pekatalog yedu yemagirazi ezuva iwe unowana magirazi ezvekutenderera, magirazi akaenzana uye ese magirazi emazuva ano uye magirazi emafashoni.
Yedu dhizaini timu inofungidzira pfungwa uye kuiisa mukuita, kuwana yakanakisa magirazi ezuva polarZvinokwanisika kusimudzira zvenguva dzese nenzvimbo. Nekudaro, isu tine mhando dzemagirazi ezuva polarYakawanda mitambo semamwe mamodheru emafashoni ezuva kana magirazi emazuva ano, achigara ari emhando yemhando, tinogona kutaura kuti akagadzirwa neimwe poindi yemasikati evakadzi.Semumaunganidzwa apfuura, isu tinoramba tichive nemagirazi edu echinyakare, magirazi akaenzana, uye zvekare zvave zvichiperekedza chiratidzo chedu kubva payakasikwa anopfuura makore gumi nemashanu apfuura. Chekupedzisira, mune ino yekuunganidza uye neimwe yapfuura, isu tinoteererawo kune akakomberedza magirazi egirazi ayo iwe aunoda zvakanyanya kubva kwatiri gore rega.
Ese akasiyana mamodheru anopindura kune imwechete chinangwa, kuti iwe ugone kuwana iyo modhi inokodzera zvakanyanya chako chaicho chaunoda nguva dzose. shaya hanya, nonconformist maguta, mutambo, mutambo zvipfeko, magirazi edu ezuva polarMhando dzese dze aesthetics dzinoshanda nemazvo.
Tine magirazi ezuva uye magirazi ezuva anobuda?
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, mu The Indian Face, nguva nenguva, tinopa magirazi ezuva anoyevedza emhando dzekare uye dzekare, saka, kunyangwe iwe uchida kutenga magirazi ezuva polaryakasimudzwa, kunge uri kuda kupa magirazi ezuva polarized, usakanganwa kuterera kunhau dzeedu epamhepo magirazi egirazi, nyatsoteerera kumagirazi edu ezuva, uyezve, nyorera kune yedu tsamba yekutsva kuti uwane magirazi edu egirazi.
Mune edu magirazi ezuva unowana akanakisa magirazi ezuva pamusika, kunyangwe iwe uchida kutenga magirazi ezuva polaryakasimudzwa, kunge uri kuda kupa magirazi ezuva polarkusimuka. The Indian Face inogara iri yako kukosha kukosha kwemari. Ehe, akanakisa uye isu tinoti inodada, inodada nebasa ratinoita, iro basa rinoitwa neumwe neumwe wevanhu vanoita timu yehunyanzvi uye dhizaini kukupa iwe yakanakisa uye yakanyanya kuita basa pamusika. Kana iwe uri kutsvaga kutenga magirazi ezuva, kana iwe uchitsvaga online online magirazi egirazi, kana iwe uchitsvaga yegirazi rezvitoro, kunyangwe iwe uchida kutenga magirazi ezuva polarakasimudza kana kupa magirazi ezuva polarized, kunyangwe iwe uchida magirazi ezvekutenderera, magirazi akaenzana, magirazi emafashoni, magirazi emazuva ano, tiri chiratidzo chako.
Nhasi, mu The Indian Face isu tinopa kuunganidzwa kunoshamisa kwemasikati anotenderera, magirazi akaenzana, magirazi emazuva ano, magirazi emafashoni ... muchidimbu
Magirazi ezuva akanakisa emarudzi ese uye masitayera! Wakatotenga muchitoro chedu chemasikati chepamhepo? Kana usati waita zvakadaro, tinokukoka kuti utarise kuunganidzwa kwedu kwegirazi remagirazi polarZvino shanyira magirazi edu ezuva, kuti iwe ugone kusarudza aunonyanya kufarira uye kukodzera mararamiro ako. Sezvauri kuona, isu tiri vanoda zvemitambo, zviito uye fashoni. Izvi zvinonyatsoratidzwa muchitoro chedu chegirazi.
Iwe unogona kuzvionera wega nekushanyira ese mativi eedu magirazi ezuva! Isu tinovimbisa kuti iwe unozofadzwa nemhando dzakasiyana-siyana dzemagirazi ezuva polarHoists isu tinotangisa gore rega rega, rakagadzirirwa zvemitambo, rakagadzirirwa kunakidzwa. Tora mukana wekutenga magirazi ezuva nezvatinopa polarNhabvu dzemitambo uye zvekushandisa, zvinogara zviri zvemhando yepamusoro, uye zvinogara zviri mufashoni Gadzirira zviitiko zvakanakisa uye pfeka imwe yeakanakisa magirazi egirazi pamhepo kunze uko!
Unoziva here kuti zvakakosha sei kutenga magirazi ezuva?
Magirazi ezuva ndeimwe yezvishandiso zvinoshandiswa zvakanyanya pasi rese. Ivo havana musiyano wezera kana bonde, uye vanokurudzirwa zvikuru navanachiremba vane hunyanzvi, zvese pamazuva ane zuva, sepachando uye pamazuva ane makore pasina musiyano. Uyezve, pfeka magirazi ezuva polarized rave chikamu chakakosha chekupfeka chakanakira vazhinji, zvekuti, nhasi uno, magirazi ezuva akanakisa ndeaya anozadzisa mabasa maviri aya: fashoni nekudzivirira.
Nyanzvi zhinji dzinofunga kuti akasiyana magirazi ezuva ari kuita basa risinganzwisisike renharaunda nekupa sarudzo yakawanda uye dzakasiyana apo vachidzidzisa nezvekukosha kwekupfeka magirazi ezuva. polaryakasimudzwa chero nguva yegore, uye kwete muzhizha chete. Magirazi ezuva akanakisa anogona kuwanikwa muzvitoro zvepanyama, zvitoro zvemaziso, pamwe nedhijitari, pamhepo, pamitengo yakajairwa kana kutodzikisirwa mumashiraji akasiyana ezuva.
En The Indian Face tava vanonyanyisa nemagirazi ezuva polaryakasimudzwa, kunyanya kubva kumasikati ezemitambo uye magirazi emafashoni, chinangwa chedu kupa magirazi ezuva akanakisa pamutengo wakanakisa. Gore rino rapfuura isu takazvipira kuti tiongorore mafuremu matsva ayo akatungamira kune anonakidza magadzirirwo ezvekutenderera magirazi ezuva uye magirazi akaenzana. Izvi zvakamisa mhando yacho zvakanaka kwazvo pamakwikwi edu. Nekudaro, nyanzvi dzakasiyana siyana nemagazini zvinotisanganisira pakati pemagirazi ezuva akanyanya muSpain nhasi, kunyanya mune zvemitambo uye zvemitambo mitambo, zvinova ndizvo zvatinotungamira.
En The Indian Face isu tinomira kunze kwekupa fashoni, dziviriro uye mutambo wemitambo. Magirazi edu ezuva akafuridzirwa nechero yedu uzivi. Isu hatisi chete magirazi egirazi epamhepo, isu tiri vafambi vanogadzira zvishongedzo zvemitambo zvevamwe vafambi, kune imwe mweya yemahara, vanoshuvira kuperekedza iwe mune yega yega mitambo yemitambo yaunoita.
Iwe unowana zvitoro zvedu zvezuva rinowanikwa online, uye pasina kupokana, isu tinokuudza, pasina kutya kwekukanganisa, kuti ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisisa dzekutenga magirazi ezuva nhasi. Parizvino, isu tinoshanda pamwe nevazhinji vatambi vanove vanonyanyisa magirazi ezuva ano sezvatiri. Sechiratidzo chemagirazi ezuva, magirazi ezuva polarhoists uye zvemitambo zvishongedzo izvo zvatave kwemakore anopfuura gumi nemashanu, The Indian Face inodada nekupota nguva nenguva ichipa kuwanda kwakakura kwezuva magirazi ezuva ano anokodzera maguta nemasikirwo. Zvinowanzo fungwa kuti magirazi ezuva akanakisa haapo, asi isu tinotenda neimwe nzira. Mumagirazi edu epamhepo chitoro nechitoro hapana mubvunzo kuti uchawana sarudzo dzepabonde dzinozokusiya uchishamisika uye dzichaburitsa mukati mako manzwiro asingadzoreke ekubuda kunodzidzira mitambo uye kuongorora nyika mukutsvaga zvitsva.
Muchokwadi mukati The Indian Face Ndicho chinangwa chedu chikuru, kunyatso kukwikwidza tichipesana nemamwe mabhuru ezuva, uye kupa yakanakisa mhando mumusika. Magirazi edu ezuva anoyevedza haatombofa akabuda muchitaira, nekuti akagadzirwa kuti agare kwemakore nemakore. Izvo hazvina basa kana iwe uchida magirazi ezvekutenderera kana magirazi emagetsi akaenzana kana magirazi emazuva ano akawanda, mune edu magirazi ekuburitsa pasina mubvunzo uchawana sarudzo yakanakira iwe kana sechipo. Iyo yekupedzisira ndizvo chaizvo zvatinoda kusimbisa, izvozvi, magirazi ezuva polarized chipo chakanakisa chisarudzo chevadiwa vedu zvisinei nekuti ivo vanoda magirazi ezuva ane fashoni nekuti ivo vanogara vari chinhu chinoshanda chinoshamisira icho isu tese tinoda kugamuchira.
Hapana mitemo, hapana miganhu. Just indian mweya
En The Indian Face tinozvirumbidza nekupa magirazi ezuva kuunganidzwa polarHoists dzakagadzirirwa kukuperekedza pane ako ese mafambiro uye mitambo yemitambo. Isu tinozvirumbidza nekuve mamwe emhando dzakanakisa dzegirazi pamusika, kunyanya tichitarisa mukugadzira magirazi egirazi polarizas yevarume, zvese zvenguva yako yemitambo uye yezuva rako nhasi. Magirazi edu ezuva polarVarume vanosimudza zvakakwana vanosangana nezvinodiwa nevatambi vekumusoro-soro mumitambo yakawanda inosanganisira kumhanya, kuchovha bhasikoro, uye mimwe mitambo yekunyanyisa uye yemitambo. Isu tinodada kutaura kuti isu tinopa akanakisa magirazi ezuva evarume anowanikwa pamusika, kunyanya pamutengo wavo / chiyero chehunhu uye nemabatiro avanoita iwo nguo kongiri, ngazvive izvi mutambo o Zvisizvo.
Isu tinopa mafuremu akagadzirwa ne polycarbonate yekukwirisa uye kureruka. Yedu brand yave ichigadzira mitambo uye yakasarudzika fashoni yemeso kweanopfuura makore gumi neshanu uye, nekudaro, tinokukoka kuti uvimbe neruzivo rwedu, runotenderwa nevatengi vedu gore rimwe nerimwe, uye tenga magirazi evarume pawebhusaiti yedu nenzira yakapusa, yakagadzikana uye yakachengeteka. Muchitoro chedu chepamhepo chepamhepo chevarume tinovimbisa akasiyana magirazi ezuva, rimwe nerimwe rawo nedziviriro UV400.
En The Indian Face Isu tinozvarwa tiri vatambi vane chinangwa chekugadzira akanakisa emitambo zvishongedzo uye akanakisa magirazi evarume pamusika. Isu tiri parizvino chimwe chemhando dzegirazi revanhu rine akanakisa emhando yepamusoro, saizvozvowo, sezvaungaona muchitoro chedu chepamhepo, isu tine yakasarudzika masitayiti evarume vehembe dzefashoni, wachi uye magirazi ezuva. Isu tinopa ese marudzi emazuva ano magirazi ezuva evarume uye zvemitambo zvishongedzo zvakanyatso gadzirirwa kuti zvidzivirire mamiriro ekunze akasiyana kana yedu Indian Midzimu ichirovedza mitambo yemitambo nemitambo yakanyanyisa. Tinokukoka iwe kuti ushanyire Varume veMagirazi eSunglass Outlet uye utenge izvo zviviri zvaunofarira, kuti iwe utarisire chiratidzo chako uye unogara uri mumafashoni, ungave uri kuita mutambo wako waunofarira kana kana iwe uchida zuva rako nezuva.
MIBVUNZO INONYANYA KUBVUNZWA CHIKAMU
Iwo magirazi ezuva ane malenzi ane sefa vertical Inodzivirira mwaranzi yechiedza kubva kuzuva inosvika kumaziso yakatwasuka.
Ndechipi chakakosha kubatsirwa nemagirazi ezuva polarkusimuka?
Kubatsira kukuru kwemagirazi ezuva polarkusimudzwa kuita kuti chiono chako chiwedzere kunakidza uye kusununguka, uku uchikudzivirira kubva kumwaranzi inogadzirwa nezuva. Neiyi nzira, ivo vanopa varume nevakadzi mukana wekuita zviitiko zvekunze zvine akadzivirirwa uye nekukurumidza kuona.
Ndezvipi zvimwe zvakanaka zvinoitwa nekutenga magirazi ezuva polarKusimudzirwa varume?
Miwani polarVanosimudza murume vanopa chiono chisina fungidziro, kunyanya yakatwasuka.
Miwani polarVarume hoists vanopa kupinza kukuru uye nhanho yepamusoro yekusiyanisa.
Miwani polarMan hoists anoderedza eyestrain uye eyestrain nekupa iyo yakasarudzika uye primal kuchena.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, magirazi ezuva akafirita polarIyo murume hoist inogona kusanganiswa nemamwe akakosha mafirita, senge anooneka mwenje mafirita uye UV firita, iyo inodikanwa nemutemo, nenzira yekuti vanopa dziviriro yakakwana.
Magirazi ezuva polarmurume akasimudzwa ndiyo sarudzo yangu yakanaka?
Miwani polarVarume vakasimudzwa vanogara vari sarudzo yako yakanaka. Rangarira kuti zvakakosha kuti uone kuti dzakasimbiswa neEU uye neidziviriro yeUV 400. Zvimwe hazvizokodzera kukudzivirira kubva kuzuva uye kuchengetedza chiono chako chakadzikama uye nekukurumidza panguva imwe chete, saka zvinonyanya kuratidzwa kuti zvishandiswe mumitambo yekunze yemitambo uye mumitambo yekutamba.
Maitiro ekusarudza akanakisa magirazi ezuva polarmurume akasimudzwa?
Kana iwe uchida kupfeka magirazi ezvevanhu akanakisa, funga kuti ndedzipi dzinokodzera iwe, magirazi egirazi akaenzana evarume, kana magirazi ezenderedzwa evarume. Iwe unofanirwa zvakare kufunga nezve chiitiko chauri kuzoita, kana chiri indoors kana zviripo panze, kana ari masikati kana husiku, kana kuri muzhizha kana munguva yechando. Zvese izvi zvinhu zvinokonzeresa sarudzo yako kana uchitenga mune edu epamhepo magirazi egirazi evarume.
Chii chandinofanira kuchengeta mupfungwa kana ndichitenga magirazi evarume?
Kutenga magirazi ezuva evarume kunogona kuve nyore kwazvo kana iwe uchiziva kuzviita. Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kutenga magirazi ezuva evarume anosangana nezvakakodzera zvitupa zvakagamuchirwa neEU. Uye zvakare, iwe unofanirwa kusimbisa pamberi usati watenga kuti iwo magirazi ezuva polarakasimudzwa murume ane protection UV400Zvakare nemagirazi echirume epamhepo evarume ayo atinopa pane webhusaiti yedu. Izvo zvakakosha kuti iwe utenge akanakisa magirazi ezuva evarume kuitira kuti iwe unonyatso dzivirirwa kubva kumhepo yezuva ultraviolet mwaranzi.
Zvakare, gara uchichengeta yako yega maitiro pamberi pekutenga magirazi evarume. Unogona kunge uri murume wemurume anopfeka magirazi ezuva akakomberedza, magirazi egirazi akaenzana, kana magirazi ezuva ane fashoni.Unoziva here kuti masitayera efashoni evarume ndeapi? Vanhu vazhinji vanotenda kuti varume havashandise nguva vachisarudza mhando yeasina kujairika kana zvekushandisa zvemitambo zvavanoshandisa, zvisinei, fungidziro iyi haina kunaka.
Varume vazhinji vanotenga nekupfeka magirazi ezuva here?
Masikati emafashoni evarume ndeimwe yezvinhu zvinotengeswa zvakanyanya pamhepo kuEuropean continent, uye isu, sechitoro chevarume chepamhepo chepamhepo, tinozvitarisa mazuva ese, uko mazana evatengi vanovimba nemhando yezvigadzirwa zvedu uye vakazvipira kutenga. pachavo, uye kupa vavanoda.
In The Indian Face ndinogona kutenga magirazi ezuva evarume?
Muchitoro chedu chemagirazi echirume unowana zvigadzirwa zvakasiyana siyana uye zvakawanda zvinopihwa magirazi evarume nemitambo yemitambo yakakunakira iwe, nekuita kwepamusoro uye nemitengo yepamusoro yemakwikwi. Zviri nyore kwazvo kutenga magirazi evarume pawebhusaiti yedu nekuchengetedzeka uye kugarika.
In The Indian Face ndinogona kuwana madhiri pamasikati evarume?
Muchikamu chedu chekubuda iwe unowana eVarume veMagirazi eSunesi Anopa anoenderana nezvose zvinodiwa nevatengi vedu. Uye zvakare, kana iwe ukajoinha tsamba yedu, tinokutumira zvinopihwa nekusimudzirwa iwe zvausingazokwanisi kutenda. Magirazi edu evarume ekupa anoiswa kune zvigadzirwa zvakasarudzwa zvinoenderana nechikamu chimwe nechimwe.
Ndeapi magirazi evarume akanakisa?
Magirazi ezuva akanakisa evarume ndeaya anogadzirwa nemhando yepamusoro muchikamu chavo, nezvinhu zvinodzivirira asi zvisina kureruka. In The Indian Face yedu yakakosha poindi yekukosha ndeye yedu yemhando / mutengo muyero, uchizivikanwa mumusika uye nemakwikwi edu sevatungamiriri mune izvi. Nekudaro, iwo aunowana muchitoro chedu chepamhepo ndiwo akanakisa magirazi evarume pamusika, akasimbiswa uye anozivikanwa neEU.
Magirazi emeso evarume anowanikwa sei mu The Indian Face?
Magirazi emeso evarume vedu ane zvinotevera hunhu:
Magirazi evarume evarume ane furemu inochinja uye unisex maitiro.
Magirazi echirume emazuva ano neTAC Lenses PolarTsanangudzo Yakakwirira inosimudza
Magirazi emeso evarume ane CAT.3 lenzi uye UV- 400 kudzivirira.
Masikati emafashoni evarume ane furemu yakagadzirwa ne polycarbonate yehuremu hwakanyanya uye kuramba.
Miwani polarmurume anosimudza neakawedzera akasimba titanium hinges
Magirazi emeso evarume ane lenzi polarZvisungo zvehukuru hwakasiyana uye mavara.
Yedu magirazi ezuva akaunganidzwa polarmurume akasimudzwa anoumbwa nemhando dzakasiyana siyana dzemhando uye mavara. Mune katarogu yedu yemagirazi ezuva evarume iwe unowana magirazi ezuva erume, magirazi evarume vakaenzana uye nemhando dzese dzemazuvano magirazi evarume uye magirazi emafashoni evarume.
Kwakamira sei magirazi egirazi e The Indian Face?
The Indian Face idhijitari mhando yemagirazi ezuva polarakasimudzwa murume, tinotengesa ese edu mamodheru egirazi polaryakasimudzwa muchitoro chedu chepamhepo chevarume chepamhepo. Isu tiripowo mune mamwe eanonyanya kuzivikanwa magweta muSpain yese. Isu tinopa magirazi ezuva evarume neakanyanya kuita pamusika, emhando yepamusoro. Pane yedu webhusaiti iwe unowana ese marudzi ese evarume magirazi ezuva anopiwa, kunyanya mune yedu Men's Sunglass Outlet chikamu.
En The Indian Face Isu tapedza makore tichidzidza optics uye mafambiro ekugadzira kuunganidzwa kwemagirazi ezuva akakomberedza evarume uye magirazi egirazi evarume, ayo gore rimwe nerimwe anopfuura zvinofungwa nemunhu wese. Ivo vaviri vatambi vazhinji vakazvipira mukutenga, uye nemararamiro vasina kugadzikana vemumaguta vakapindwa muropa avo vakatitenga vakagutsikana zvakanyanya nekutenga kwavo kwezuva magirazi. polarized varume uye, nekudaro, ivo vakakurudzira magirazi evarume vedu kubva kune edu epamhepo magirazi egirazi evarume.
Mabhenefiti uye maitiro ekutenga magirazi ezuva polarmurume akasimudzwa mukati The Indian Face:
Tenga magirazi ezuva evarume nekuita kwakanyanya pamusika.
Tenga magirazi ezuva pamhepo evarume zvakachengeteka uye nekukurumidza pamapuratifomu akasimbiswa seaya atinopa pane yedu webhu chikuva.
Shanyira varume vedu magirazi egirazi uye utarise kuunganidzwa kwedu kutsva, uchikwanisa kukutungamira pazvipfeko zvitsva.
Pinda mungoro yako yekutengera magirazi ezuva evarume epamhepo anochengetera mitambo nemidziyo yakasarudzika yaunofarira zvakanyanya, kusanganisira magirazi evarume emafashoni aunofarira uye anokwana zvirinani nemitambo yako.
Kana iwe uine kodhi yekutapudza, unogona kuishandisa pakutenga mu "pinda kodhi yemutengo" chikamu, nenzira iyi unogona kutenga magirazi evarume pamhepo nezvipo zvakakosha, sezvingave zviri. Imwe nzira ndeyekutenga magirazi evarume mune echirume chedu chevanhurume, uko kwaunowana mikana yakawanda yemagirazi ezuva anosanganisira magirazi ezuva erume, magirazi emeso evarume, magirazi emafashoni evarume nemagirazi ezuva evarume vemazuva ano, vese vane mutambo wemitambo. soro kuita.
Kuti upedze, ingo tsanangura ruzivo rwako rwekutakura, zadzisa muripo uye isu tinokutumira magirazi ako matsva polarmurume akasimudzwa kukero yaunoratidza.
Rangarira kuti mutengo wakaderera hazvireve kuti wakaderera mhando. Muchokwadi, iwe unogona kutenga magirazi ezuva evarume nezvidimbu zvikuru muchitoro chedu chepamhepo www.theindianface.com, kunyanya mune edu evanopfeka magirazi ezuva echirume.
En The Indian Face isu tine magirazi ezuva ano murume ane lenzi polaryakasimudzira chero mhando yemamiriro, uye Ultra mwenje mafuremu ekuti unzwe zvirinani uye kugadzikana.
Tinokukoka iwe kuti upinde yedu online magirazi evarume echirume kuti uwane sarudzo dzakasarudzika dzinoenderana nezvinodiwa zvako semumhanyi wemazuva ano: unogona kuwana magirazi egirazi evarume, magirazi ezvekutenderera evarume, magirazi emafashoni evarume uye magirazi emazuva ano evarume, ane magadzirirwo echirume.
Uye usakanganwa kushanyira magirazi evarume vedu! Unogona kusarudza sarudzo dzakasarudzika nezvipo mumitambo yemitambo, pamwe neakanakisa magirazi ezuva evarume. Sarudza zvaunofarira uye kukuona pane ushingi!
The Indian Face Isu takagadzira akasiyana siyana echikadzi sarudzo kune vakadzi nevasikana veese mazera kuti vafarire zvakajairika uye zvemitambo zviitiko muzuva, iri 100% inodzivirirwa kubva kumagetsi e-ultraviolet uye ichitaridzika yakanakisa ine yakasarudzika uye isingakundike mamodheru emazuva ano magirazi emadzimai.
Kutenga magirazi ezuva pamhepo evakadzi ndiko kurota kwemusikana wese ari murudo nehupenyu, fashoni uye mitambo yemitambo. Ivo vave chimwe chezvinhu zvinonyanya kushandisika, zvinobatsira uye zvakanaka izvo zvaunogona kukwidziridza chipfeko chako, kunyanya kana iwe uri munhu anoda fashoni, mitambo yekunze uye mutambo. Pasina mubvunzo, magirazi evakadzi anozadza mabasa asinga peri muhupenyu hwezuva nezuva hwemusikana anoda kutarisira hutano hwemaziso uye nekumupfekedza chipfeko chake nenzira inoshamisa, uye yedu ndeimwe yemhando dzakanakisa dzemasikati evakadzi.
En The Indian Face Isu tinozvirumbidza nekubatana nevatambi mumapoka akasarudzika evakadzi mumarudzi ese emitambo yemitambo nemitambo yakanyanyisa. Mamwe emamiriri edu emhando yepamusoro, kusanganisira surfer Lucía Martiño, vasarudza uye vakasimbisa magirazi emadzimai epamhepo uye chiratidzo chedu seimwe yeakanakisa pamusika nhasi. Saiye, kwedu kwakasarudzika kwevatambi vechikadzi vakativimba isu uye neruzivo rwedu mumawadhi evakadzi epamhepo epamhepo kuti tivashandise panguva yavo yekujaira nemakwikwi emitambo.
Vamiriri vedu vemitambo vanoziva kusarudza The Indian Face seimwe yemhando dzakanakisa dzemasikati magirazi evakadzi, pakati pemhando dzese dzemagirazi evakadzi aripo iye zvino. Sezvavakatiudza: "rimwe chete girazi remasikati harina kukwana." Vazhinji vavo vakareurura kwatiri kuti vanogara vachisarudza akati wandei maviri maviri ane mafuremu akasiyana uye maumbirwo. Vamwe vanosarudza magirazi enguva dzekutenderera evakadzi uye vamwe vanosarudza magirazi egirazi evakadzi, asi havatomboasiya kumba. Magirazi emadzimai emazuva ano ndiwo anokodzera kana chinhu chako chiri chekubuda uye kunakidzwa nekunze.
Sekambani yemagirazi emhepo epamhepo evakadzi uye zvemazuva ese uye zvemitambo accessories, isu tine makore gumi nemashanu ezviitiko zvinoratidza kuti takazvipira kubazi redu, uye kuti tinotsigira vatambi vanobva kumativi ese epasi vanoda kukwikwidza uye kunakidzwa nemitambo yavo neakanakisa zvishongedzo uye magirazi ezuva akanakisa evakadzi nevasikana, aine mashandiro epamusoro-soro, akareruka uye asingagadziki mafuremu uye iwo mavara akasanganisika emwaka uno. Magirazi edu ezuva polarized vakadzi vakagadzirwa kuitira kuti iwe ugone kuishandisa mune yako zuva nezuva, uyezve kana iwe uchidzidzira waunofarira mutambo. Iwe unowana iwo akanakisa mamodheru emadzviti emadzimai epamhepo online mune edu evakadzi magirazi epamhepo chitoro uye mune edu evakadzi magirazi magirazi
Kana iwe uchida adventures, isu tinokukoka iwe kushanyira edu evakadzi magirazi emashopu, uko isu tinopa akasiyana akasiyana siyana asingakundike sarudzo, yakafuridzirwa nezviito, zvisikwa uye mutambo. Shingairira kugara wega dambudziko rehupenyu nomweya wakasununguka uine akanakisa magirazi emadzimai!
Kune vese vasikana vanoda zvemitambo uye fashoni, kune magirazi echikadzi emazuva ano kubva The Indian Face. Isu tinopa musanganiswa wakakwana wepasirese nyika mune yega yega maunganidzwa ayo atinopa muchitoro chevakadzi chegirazi redu. Bata vaunofarira zvakanyanya kubva kumagirazi edu evanhukadzi uye vakuone uchiita!
Ndinogona kutenga magirazi echikadzi evakadzi pa The Indian Face?
En The Indian Face Isu takasarudzika mukugadzirwa kwemagirazi emadzimai emafashoni ekugadzira nekupa akanakisa magirazi emadzimai pamusika. Dhizaini yedu ndeye Unisex, vanogona kuenderana nezvinodiwa nevarume vedu vateereri uye veduwo vakadzi vateereri. Izvo zvakati, muchipo chedu chechigadzirwa iwe unowana zvakanyanya kuwanda mhando dzevakadzi kupfuura vamwe. Chero mibvunzo yaunayo, tinokukoka iwe kuti utibvunze nerunyararo ruzere rwepfungwa.
Muchitoro chedu chepamhepo tine chikamu chekuburitsa magirazi emadzimai emadzimai umo mwedzi wega wega tinopa zvikwereti zvakakura kuitira kuti vatambi vedu, vedu vasingaenderane nemadhorobha vakapindwa muropa uye maIndia Midzimu vashanyire, vasarudze uye vatenge magirazi evakadzi emhando dzose, mavara uye zvimiro, semuenzaniso , magirazi ezuva akakomberedza evakadzi uye magirazi egirazi akaenzana evakadzi.
Ndingawana here magirazi emadzimai ekutengesa pa The Indian Face?
Kana iwe uchitsvaga evakadzi magirazi ezuva anopiwa, mune edu evakadzi magirazi ekuburitsira iwe unowana akawanda sarudzo yemamodeli nekutaridzika kwekutengesa, mairi isu tinopa ese ese magirazi egirazi. polarakasimudzwa mukadzi. Isu tinosanganisa magirazi ezuva akakomberedza evakadzi, magirazi akaenzana evakadzi, magirazi emafashoni evakadzi uye magirazi ezuva ano evakadzi. Imwe neimwe ine yakasarudzika dhizaini, yakanakira kurwisa mhando dzese dzemamiriro ekunze akashata, uye kunyanya inokurudzirwa kudzidzira mitambo yekunze uye, zveshuwa, kupfeka muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Usakanganwa kuona magirazi emadzimai edu anopiwa anowanikwa pane webhusaiti yedu!
Ndinogona kutenga magirazi ezuva polarmukadzi akasimudzwa mukati The Indian Face?
The Indian Face chiratidzo cheSpanish chakasarudzika mukugadzira, kugadzira uye kugovera magirazi ezuva polarVakadzi vanosimudza zvine hunyanzvi hwekuita uye yakanakisa mutengo / mhando huwandu. Muchitoro chedu chemagirazi polarizadas vakadzi online tinopa ese edu eIndia Midzimu yakanakisa inopa kune vakadzi magirazi ezuva uye magirazi polarhoists yakagadzirirwa neakanyanya kuita. Iwo anowanikwa mune yedu yegirazi chikamu chikamu uye mune edu evakadzi magirazi esiroti.
Ndezvipi zvakanak nekutenga magirazi ezuva polarmukadzi akasimudzwa?
Tenga magirazi ezuva ano polarizadas mujer ndeyekudyara mufashoni asi, pamusoro pezvo, kubatsira kwayo kukuru kubatsira kuita kuti chiono chako chive chinonakidza uye chakasununguka. Magirazi ezuva polarVakadzi vakasimudzwa, vanokudzivirira kubva pamwaranzi inogadzirwa nezuva, nokudaro ichipa vese vatambi mukana wekuita zviitiko zvekunze zvine chiono chakadzivirirwa uye chisingachinje.
Ndezvipi zvimwe zvakanaka zvinoitwa nekutenga magirazi ezuva polarKusimudzirwa kwevakadzi?
Miwani polarVakadzi hoists vanopa chiratidzo chisina glare.
Miwani polarKusimudza kwevakadzi kunopa musiyano mukuru uye kupinza.
Miwani polarVakadzi hoists vanopa echinyakare uye primal coloring, nekudaro kudzikisira eyestrain uye eyestrain, nekupa iyo yakasarudzika uye primal coloring.
Miwani polarized vakadzi vanogona kusanganiswa nemamwe akakosha mafirita, semuenzaniso, inooneka mwenje mafirita uye UV firita, inopa zvakakwana kutarisisa kumeso ako uye kwako kuona.
Imwe yemabhenefiti akakosha ekupfeka magirazi ezuva polarized vakadzi ndeyekuti iwe unochengetedza maziso ako kubva pazvinogona kuita mamiriro iwe paunenge uchipfeka mune fashoni, zvisinei kana iwe uchida zvimwe kupfeka kutenderera magirazi ezuva evakadzi kana magirazi akaenzana evakadzi. Maitiro acho ari kwauri!
Nei magirazi emadzimai evakadzi achizivikanwa zvakadaro mumafashoni evakadzi?
Magirazi emadzimai emadzimai akagadzirwa kuti anyatsogadzirisa chipfeko chevakadzi vanofarira kuita zviitiko zvekunze, zvese muguta nemumaruwa. Nhasi, vakadzi vanowedzera uye vanonzwisisa kukosha kwekupfeka magirazi ezuva polarYakasimudzwa kuchengetedza mboni uye kuona, kunyanya kana uchitamba mitambo. Mune ino kesi, chete magirazi ezuva polarakasimuka mukadzi The Indian Face ivo vanokwanisa kupa kupinza kwechokwadi uye kugona kuona.
Ndingaite sei kuti nditenge magirazi ezuva pamhepo evakadzi?
Izvo zvakakosha kusarudza mhando dzakanakisa dzemasikati evakadzi; Ipapo chete ndipo paunovimbisa kugamuchira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Nguva dzose yeuka:
Tenga magirazi emadzimai ako mune yakasimbiswa ecommerce kana epamhepo yevakadzi magirazi egirazi nemazano akanaka uye ongororo, uye nemakore echiitiko muchikamu.
Tenga magirazi emadzimai muchitoro chepamhepo neyakareruka, yakachengeteka uye yakasununguka kutenga maitiro kuitira kuti ugamuchire magirazi emadzimai emafashoni panguva, uye mune mamiriro akakwana.
Zvakakosha kuti kana uchitenga magirazi evakadzi pamhepo unoshandisa nguva kuverenga zvese zvayinazvo kuitira kuti unyatso sarudza magirazi emadzimai akanakisa kubva pane zvese zviripo pa internet zvinosanganisira: Kudzivirirwa UV400, mahinji anoshanda, akareruka mafuremu uye akasimba lenzi anotsigirwa neEU.
Ndekupi kwandingatenga magirazi ezuva akanakisa evakadzi?
Kutenga magirazi emadzimai emadzimai kuri nyore, hongu. Iwo akanakisa iwo anotsanangurwa nehunhu / mutengo muyero uye iwe uchaawana iwo mune edu epamhepo evakadzi magirazi egirazi. In The Indian Face isu tinopa kushingairira kwedu, zuva nezuva, kugadzira nekugadzira magirazi emadzimai akanakisa pamusika. Ivo vatove anopfuura makore gumi neshanu ezviitiko vachigadzira mikuru mikuru ine mashandiro epamusoro emasikati emadzimai emazuva ano ayo agara achipfuura zvinotarisirwa nevatengi vedu.
Rangarira: Tine magirazi edu evanhukadzi anowanikwa kuitira kuti ugone kutenga magirazi evakadzi nguva dzese dzaunoda, uchitsvaga idzo dzinokodzera maitiro ako mune edu akasiyana zvigadzirwa. Ungatsunga kutaridzika zvakanaka nemaviri magirazi evakadzi emafashoni emwaka uno nekushanyira magirazi emadzimai edu anopa chikamu chewebhu webhusaiti. Izvo hazvina basa kana yako masitayera yakatenderera magirazi evakadzi kana masikweya magirazi emadzimai! Une chokwadi chekutsvaga iwo akakodzera iwe.